Ixabiso elikhulu kuMbindi Jakarta - I-Airbnb
Ixabiso elikhulu kuMbindi Jakarta
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguReza
Ixabiso elikhulu leyunithi yegumbi kwi-minimalist yanamhlanje eyilwe, kumgangatho ophakamileyo ngaphakathi kwesakhiwo sezindlu ezitshatyalaliswayo zanamhlanje ezinombono wokuphefumla. Umgama wokuhamba ngendlu ukuya kudederhu lweevenkile ezidumileyo, izakhiwo zeofisi ezidumileyo, kunye ne-MRT & Busway bunderan Hi station.
Nceda ujonge iifoto ngeenkcukacha emva koko ufunde kwaye ubone, Jonga Incwadi yesiKhokelo.
Fumana isaphulelo sokubhukisha qho ngeveki nangenyanga, ukucocwa kwegumbi lokulala simahla, iitawuli zasimahla, kunye nokutshintsha kwamashiti ebhedi asimahla.
Iyunithi yezindlu luhlobo lwesitudiyo olunombono ongqongwe zizakhiwo eziphakamileyo kumbindi wesixeko saseJakarta ukusuka kwifestile kunye nebalcony kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ukupheka isidlo sakusasa sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa, iTV yekhebula, ukufikelela kwi-intanethi iiyure ezingama-24 (i-wifi), indawo yokusebenza enobubele kwilaptop. Igumbi lokuhlambela elixhotyiswe ngokupheleleyo njengesihlalo sangasese esineshawa yokuhlamba, ishawari eshushu nebandayo, umatshini wokuvasa ozenzekelayo, isepha kunye nesitya seshampu, njl.
4.91 · Izimvo eziyi-198
Le ndlu ikufuphi nodederhu lweevenkile ezidumileyo njengeGrand Indonesia njl. Isitrato saseThamrin esineseshini yosuku lwasimahla lwemoto rhoqo ngeCawe ukusuka ngentsimbi yesi-6 ukuya kwi-11 kusasa kuMbindi Jakarta.
Umbuki zindwendwe ngu- Reza